Bengingalazi ikhono lami laziveza lona’ – OweNqubeko Fm – Isambane News
Home > Entertainment > Bengingalazi ikhono lami laziveza lona’ – OweNqubeko Fm
June 22, 2018 Isambane News
SamaJobe Zulu – Ushintshe unyawo umsakazo womphakathi waseMnambithi, owaziwa ngeNqubeko FM. Lo msakazo unezinyanga ungene ezindlini zawo ezintsha zomsakazo njengoba beshintshe indawo. IsiZulu sithi ‘Induku enhle igawulwa ezizweni’, kodwa iNqubeko FM igawule khona eMnambithi yathola amakhono amasha amangalisayo amathathu. UKwanda Sithole (22), Bongeka Hadebe abasakazi abasha kanye noNonkululeko Mazibuko ongumfundi wezindaba.
Isambane news ikhulume noKwanda ukwazi kabanzi ngaye, ungumfanyana nje omncane odabuka khona eMnambithi endaweni yaseZakheni. Usakaza ngoMgqibelo kusukela ngo-3 kuya ku-5 ntambama ohlelweni lwe-Hip Hop ngokubambisana noBongeka Hadebe naye osanda kuba ingxenye yalomsakazo. Uphinde asakaze ngeSonto kusukela ngele-10 ekuseni kuya kwelo-1 ntambamba ohlelweni olubizwa nge-On mind, body and soul therapy we talk about Love and relationships oludlala umculo weRnB.
Uthi ubengalazi ikhono lakhe liziveze lona, futhi kusukela kuqale lo nyaka ubengakaze acabange ukuthi kuyoshaya lesikhathi esengumsakazi, “Ngifundele ugesi emva kokuphothula umatikuletsheni, bengingakaze ngicabange ngomsakazo futhi kusukela uqalile lo nyaka bengingakaze ngicabange ukuthi kuyoshaya lesi sikhathi sonyaka sengingumsakazi,” kubeka yena. Uthi umsakazo bekuyinto ayithandayo vele, kodwa ubone uthando nekhono ngesikhathi ezidlalela nomngani wakhe emthumelela into ayiqophile edlala esakaza, umngani wase abelana ngayo nabanye abangani wathola ukwesekwa okuyisimanga. “Bengisazibuza nje ukuthi yini ikhono lami lase liziveza lona ngalithanda futhi, ngakho ngithi umsakazo akuyona nje into ebeyisemqondweni wami ngisakhula yinto nje engifikele emva kokuphothula umatikuletsheni,” kuqhuba yena.
Ubelokhu emamatheka njalo ephendula intatheli, leli geza lensizwa elithe lingelesibili kumama kodwa wathi ngeke akwazi ukukhuluma ngohlangothi lukayise. Uthi usafuna ukuhlala azinze kahle kule mboni yezokusakaza ngaphambi kokuba avule amaphiko akhe aqale uhambo lwakhe, ngokwakhe uzibona esebenzela umsakazo omkhulu noma esengumethuli wezinhlelo kumabonakude. Uthi uthando lwakhe lokuba ngumethuli wezinhlelo kumabonakude lwaqala lapho efisa ukwethula uhlelo lwesimo sezulu. Uthembisa ukwenza lukhulu kulemboni, uthi okunye uzokubona ngendlela okwamanje usabheke lokhu asanda kukuqala.
Amajuba District Municipality officially handed-over a water scheme project at Gooden in Dannhauser Ward 3